Shuruud lagu xiray in dhaqaalaha Soomaaliya si joogto ah kobac u sameeyo
Shuruud lagu xiray in dhaqaalaha Soomaaliya si joogto ah sare ugu kaco
Bangiga Aduunka ayaa sheegay in dhaqalaha dalka uu sanadkan kor u kacayo hal talaabo, inkasta oo uu shuruud ku xiray in uu si joogto ah u kabco.
WASHINGTONG, US – Bangiga Aduunka ayaa sheegaya in uu rajeynayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu sanadkan 2019 uu sarre u kaco 1%. Sanadkii hore, wuxuu ahaa 2.8%, waxaana midkan la filayaa in uu gaaro 2.9%.
Bartamaha sanadkan ayuu tibaaxay in uu ku kalsoon yahay in uu noqdo 3.2% illaa iyo 3.5%, inkasta oo shuruud lagu xiray in uu heerkaasi u talaabsado, sidda laga soo xigtay warbixin soo baxday Axadii.
Sidda ku cad qormadda, shuruuda ayaa waxay tahay sida loo joogteeyo dib u habeynta dhaqaalaha ee ay haatan wado dowladda, taasi oo horseedeysa kobac joogto ah.
Dalka dhaca Geeska Afrika ayaa xasilooni daro kasoo kabanaya tan iyo 1991-dii kadib dagaal sokeeye. Tobbankii sano ee lasoo dhaafay, waxaa radaadiyey weeraro argagixiso oo ay geysaneyso AlShabaab.
Dhinaca kale, warbixinta ayaa lagu sheegay in dowladdu horumar ka sameysay dhanka canshuur uruurinta, taasi oo laga dareemayo sarre u kac 29%, taasi oo ka dambeysay markii la bedelay lix siyaasad oo ku wajahan.
"Iyadda oo ay tahay tani mid la dhiirogeliyo, haddana wali ma ahan mid ku filan dakhliga ay u baahan yihiin waaxyaha caafimaadka iyo waxbarashadda," ayuu Bangigu ku sheegay maqaalkiisa.
Canshuur qaadida dowladda ayaa waxaa hareer-socota mid kale oo ay qaataan AlShabaab, taasi oo xitaa ka badan tan dowladda, sidda lagu ogaadey baaris kala duwan oo ay sameeyeen warbaahino caalami ah.
Wasiirka Maaliyadda, Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, ayaa si cad ugu sheegay wargeyska Washington Post in aysan waxba ka qaban karin dakhliga Shabaabka uga soo xarooda meelo ay Muqdisho kamid tahay.
World Bank ayaa si adag wuxuu Xukuumadda Muqdisho ugu booriyey in ay dhaqaalo badan oo cadaan ah ay ka hesho maamuladda si ay ugu dhiirogeliso Tacliinta.
Bishii May, hay’adda lacagta aduunka ayaa sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ku socda dhabihii saxda ahaa, balse waxay ka digtay in uu wali khatar ugu jiro amni daro, isbedelka cimilada iyo saboolnimada.
Soomaaliya iyo Bangiga Aduunka oo kawada hadlay deyn cafinta
Soomaliya 03.11.2019. 17:24
Soomaaliya ayaa caalamka looga leeyahay aduun dhan shan bilyan oo Doollar-ka Mareykanka ah.
Midowga Yurub oo €100 million ugu deeqay dowladda Soomaaliya
Soomaliya 27.09.2018. 23:16
Beyle oo fahfaahiyey lacag uu World Bank ugu deeqay DF
Soomaliya 26.09.2018. 23:43
World Bank oo deeq maaliyadeed siinaya Somalia 30 sano kadib
Caalamka 26.09.2018. 17:02
Madaxda Maamulada oo DFS ku wehlin doona Shirka Brussels
Soomaliya 14.06.2018. 21:03
Dagaal ka qarxay Cadaado iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 12.06.2018. 22:12